कसरी फोटोशपमा किनारहरू चिकनी गर्ने र तपाइँको छनौट सुधार गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
लोला करील | | Photoshop, ट्रिक्स, ट्यूटोरियलहरू
राम्रो छनौट गर्नु भनेको फोटोशपमा सब भन्दा कडा परिश्रम गर्ने कार्यहरू मध्ये एक हो, यो ट्यूटोरियलमा हामी तपाईंलाई देखाउने छौंaतपाइँको छनौट सुधार गर्न धेरै साधारण चाल कार्यक्रममा। थप रूपमा, हामी चयन गर्न मुख्य उपकरणहरू समीक्षा गर्नेछौं र तपाईं फोटोशपमा किनारहरू चिकनी गर्ने तरिका सिक्नुहुनेछ चयन मास्कको साथ।
1 फोटोशपमा चयन उपकरणहरू
1.1 द्रुत चयन उपकरण
1.2 जादू छडी
1.3 वस्तु चयन उपकरण:
1.4 विषय चयन गर्नुहोस्
2 छनौट मास्क
2.1 किनारा परिपूर्णको लागि ब्रश
3 फोटोशपमा राम्रो छनौटहरू र चिकनी किनारहरू बनाउन सजिलो ट्रिक
3.1 विषय चयन गर्नुहोस्
3.2 तह मास्क र पृष्ठभूमि सिर्जना गर्नुहोस्
3.3 चयनित विषयमा फर्कनुहोस् र चयन परिमार्जन गर्नुहोस्
3.4 तह मास्कको साथ त्रुटिहरू सच्चाउनुहोस्
फोटोशपमा चयन उपकरणहरू
स्वचालित चयन उपकरणहरूले तपाईंलाई धेरै समय बचत गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईंसँग तिनीहरू छन् सबै एकसाथ उपकरणपट्टीमामाथिको छविमा संकेत गरीएको ठाउँमा थिच्नु पर्छ।
La द्रुत चयन उपकरण पेंट ब्रश जस्तै काम गर्दछ। यदि तपाई सकारात्मक विकल्पको साथ ब्रशमा उपकरण विकल्प पट्टीमा क्लिक गर्नुहुन्छ, जब चित्रकला गर्दा तपाईले चयनमा थप्नुहुन्छ। यदि तपाईंले गल्ती गर्नुभयो र अधिक चयन गर्नुभयो भने, तपाईं विकल्प कुञ्जी समाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं म्याकमा काम गर्नुहुन्छ वा Alt यदि तपाईं विन्डोजमा काम गर्नुहुन्छ भने चयनबाट घटाउनुहोस्।
उत्तम परिणामहरूका लागि जाँच गर्नुहोस् ed किनारा सुधार गर्नुहोस् »तपाईं आफ्नो आवश्यकता अनुसार ब्रश को आकार पनि परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ।
यो क्षेत्र मा एक एकल क्लिक गरेर स्वचालित चयन गर्दछ। सहिष्णुता संगयहाँ, उपकरण विकल्प मेनूमा, तपाई फोटोशपलाई बताउनुहुन्छ कि रंग रंग गमुट कत्ति फराकिलो हुनुपर्छ पिक्सेलको चयन गर्दा, त्यो हो:
यदि तपाइँ राख्नुहुन्छ भने धेरै कम सहनशीलता, उदाहरणका लागि ,०, बाट पिक्सेल छनौट गर्दछ धेरै समान रंगहरू
यदि तपाइँ राख्नुहुन्छ भने उच्च सहिष्णुताउदाहरण को लागी 60०, मान्दछौं चयनमा अधिक र colorsहरू।
तपाईले जाँच गर्नु पर्दछ कुनचाहिँ सहि ठीक हो भनेर पत्ता लगाउन, यो फोटो र तपाईले छनौट गर्ने क्षेत्रमा निर्भर गर्दछ। महत्वपूर्ण, चिन्ह «चिल्लो», ताकि चयनले किनारहरू राम्रोसँग व्यवहार गर्दछ।
वस्तु चयन उपकरण:
स्वचालित रूपमा तपाइँ छवि को वरिपरि वस्तु चयन गर्नुहोस्. तपाईंले भर्खर माउस तान्नु पर्छ र कार्यक्रमले वस्तु पत्ता लगाउँदछ।
विषय चयन गर्नुहोस्
यो उपकरण विकल्प पट्टीमा उपलब्ध हुन्छ जब तपाईं कुनै स्वचालित चयन उपकरणमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यो अवस्था मा, कार्यक्रम छवि मा हाइलाइट वस्तु वा विषय चयन गर्दछ.
फोटोशपमा छनौट गर्दा चयन मास्क त्रुटिहरू सच्याउनको लागि तपाईंको सबैभन्दा राम्रो सहयोगी हुनेछ। चयन मास्क माथिको कुनै पनि चयन उपकरणमा क्लिक गरेर उपलब्ध छ।
तपाईं सेट गर्न सक्नुहुन्छ बिभिन्न दृश्य मोड:
प्याज छाला दृश्य सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको हो। यस अवस्थामा, चयनित भाग रंगीन र पृष्ठभूमि (के चयन नगरिएको) वर्गमानले कभर देखा पर्दछ। तपाईं के समावेश गर्नुहुन्छ र के छोड्नुहुन्छ भनेर हेर्न तपाईं पारदर्शिता स्तरसँग खेल्न सक्नुहुनेछ।
सुझावहरू: जहाँ छविहरूको पृष्ठभूमि हल्का हुन्छ, कालो दृश्य मोड प्रयोग गर्नुहोस्। जब पृष्ठभूमि अँध्यारो हुन्छ, दृश्य मोड सेतो हुन्छ। यस तरीकाले तपाईले छनौट गर्नुहुनेछ तपाईको छनौट कति उत्तम छ र यदि त्यहाँ छेउछाउको हेलो छ भने यो घातक छ र यही हामीले छनौटको किनारहरू मीठो पार्ने मार्फत समाधान गर्ने छौं।
उपकरणपट्टीमा, "चयन मास्क" मोड भित्र, तपाईं उपलब्ध हुनुहुन्छ सुधार गर्न केहि उपकरणहरू। म सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने ब्रश र छिटो चयन उपकरण हो। तर किनारहरू चिल्लो बनाउन एक धेरै चाखलाग्दो उपकरण छ: सही किनाराहरूमा ब्रश।
किनारा परिपूर्णको लागि ब्रश
यो ब्रश छनोटको किनारहरू स्मूद गर्दछ र तपाईंलाई अझ राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यो अरू कुनै ब्रश जस्तै काम गर्दछ, यदि, उपकरण विकल्प पट्टीमा, तपाईं सकारात्मक संकेत छनौट गर्नुहुन्छ तपाईंले चयनमा समावेश गर्नुभयो र यदि तपाईं नकारात्मक चयन गर्नुहुन्छ भने तपाईंले चयनबाट घटाउनुहुन्छ। ब्रशको आकार पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
फोटोशपमा राम्रो छनौटहरू र चिकनी किनारहरू बनाउन सजिलो ट्रिक
छनौट मास्क किनारहरू सफा गर्न र अझ राम्रो छनौट गर्नको लागि धेरै उपयोगी छ, तर म तपाईंलाई देखाउँदैछु एक चाल जुन तपाईं कुनै समय मा एक धेरै सफाई चयन प्राप्त हुनेछ।
हामीले गर्ने पहिलो कुरा हो विषय चयन गर्नुहोस् (हामीले देखेका केही द्रुत चयन उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्)। उदाहरण को लागी, म "विषय छान्ने" छनौट गर्दछु, तर तपाई एक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको लागी सबैभन्दा सहज छ।
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने, तपाईं कोष चयन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि चयन उल्टो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको कम्प्युटर कीबोर्डमा आदेश + shift + I थिच्दै, यदि तपाईंसँग म्याक छ, वा ctrl + shift + I यदि तपाईं विन्डोजसँग काम गर्नुहुन्छ भने।
तह मास्क र पृष्ठभूमि सिर्जना गर्नुहोस्
त्यसो भए हामी लेयर मास्क बनाउनेछौं। तपाईं अघिल्लो फोटोमा स indicated्केत गरिएको प्रतीकलाई थिचेर यो गर्न सक्नुहुन्छ। तल एक समान रंगको एक तह सिर्जना गर्नुहोस्, एक तटस्थ खैरो छनौट गर्नुहोस्। यदि तपाइँ चौडा हुनुभयो भने, तपाईले देख्नुहुनेछ कि हाम्रो चुनावमा एकदम कुरूप किनार आएको छ। यसलाई ठीक गरौं!
चयनित विषयमा फर्कनुहोस् र चयन परिमार्जन गर्नुहोस्
केहि चीज जुन सामान्यतया यी केसहरूमा काम गर्दछ चयन परिमार्जन गर्नुहोस्। हामी यसलाई निम्न अनुसार गर्नेछौं:
ठोस र color्ग तह मेटाउनुहोस् र तह मास्कबाट छुटकारा पाउनुहोस्। तपाईं नियन्त्रण + Z (विन्डोज) वा आदेश + Z (म्याक) गर्न सक्नुहुनेछ जबसम्म तपाईं चयनित विषयमा पुग्नुहुन्न वा ट्याब go विन्डो »> ईतिहासमा जानु हुँदैन र चरण« विषय चयन गर्नुहोस् »मा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यसपछि शीर्ष मेनूमा जानुहोस् र "चयन" ट्याबमा "परिमार्जन" को लागि खोजी गर्नुहोस् र "ढल्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।। यस कार्यको साथ हामी केही पिक्सेल सिक्न चयन प्राप्त गर्दछौं। एउटा विन्डो खुल्नेछ, किनारमा रहेको हलो एकदमै राम्रो छ, हामीलाई केवल २ वा p पिक्सेल बन्द गर्न छनौट चाहिन्छ, त्यसैले हामी ती मानहरू राख्छौं।
तह मास्कको साथ त्रुटिहरू सच्चाउनुहोस्
यदि तपाईंले कुनै पनि अधिक त्रुटिहरू देख्नु भयो भने, सधैं तपाईं लेयर मास्क बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर र ब्रशको साथ तपाईं ती साना त्रुटिहरू सच्याउन सक्नुहुन्छ कि रहनको लागि सक्षम भएको छ। त्यो याद गर्नुहोस् कालो रंगको साथ हामी समावेश गर्दैनौं को चयन र सेतो संग हामी समावेश गर्दछौं।
यदि तपाईंलाई यो चाल मनपर्‍यो भने, तपाईंले यसका लागि मिस गर्न सक्नुहुन्न फोटोशपमा सजिलो र छिटोको र change्ग परिवर्तन गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी फोटोशपमा किनारहरू चिकनी गर्ने र तपाइँको छनौट सुधार गर्ने
एडोब एनिमेट सीसी